ဟယ်လို! ဟူဂို O. Rivera ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် (Hugo O. Rivera)
မင်္ဂလာပါချစ်လှစွာသောဧည့်သည်, ငါ့နာမကို Hugo အိုမာ Rivera Calzadillas.I ဖြစ်ပါတယ်တဲ့မက္ကဆီကန်အမေရိကန်ပရိုဂရမ်မာများနှင့်အနုပညာရှင်ဖြစ်၏။ ငါပြောသို့မဟုတ်ရေးရန်သင့်ရဲ့ဘာသာစကား, ဒါပေမယ့်ငါသင်ယူဖို့ဆန္ဒရှိကြပါဘူး။ အင်ျဂလိဗားရှင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏က်ဘ်ဆိုက်၏စပိန်ဗားရှင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ စာဖတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သငျသညျမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။ ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၏အွန်လိုင်းခရီးမှာများစွာသောစိတ်ဝင်စားဖို့က်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေလိုရှိ၏။ Please visit my English website, o visita mi sitio web en español. — Hugo O. Rivera 🇲🇽 🇺🇸 🇲🇲